Generaal Dhagabadan oo Udigay Askarta Dowladda Soomaaliya
Home Somali News East Africa Generaal Dhagabadan oo Udigay Askarta Dowladda Soomaaliya
Xilli ciidanka Dowladda Soomaaliya ay dhac kala duwan ugeestaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Gobalada dalka Soomaaliya meelaha ay dowladda ka joogto iyo sidoo kale Magaalada Muqdisho ayaa saraakiisha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed waxa ay ujeediyeen ciidanka digniin ballaaran.
Abaanduulaha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed Generaal C/kariin Yuusuf Aadan Dhagabadan oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu sheegay in ciidamada Dowladda Soomaaliya aysan shacabka dhac ugeysan karin.
Wuxuu sheegay askarigii ku dhaqaqaaqa falal dhibaateeynaya shacabka Soomaaliyeed arintaasi ay tallaaboa dag ka qaaadi donaan islamarkaana ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed uu amar buux siiyay taasi oo ku aadan inay gacanta kusoo dhigaan askariga geesta fal dhac ah.
Abaanduulaha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay inuusan udulqaadan karin in hoos loo dhigo sharafta ay leeyihiin ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed iyo tuutaha ay wataan ciidanka qalabka sida.
Tuutaha qaranka Soomaaliyeed ayuu sheegay in shacabka Soomaaliyeed markii ay arkaan la doonayo inay usoo cararaan balse aysan marna rajeynayn inay ka cararaan ciidanka Shacabka iyaga oo ka cabsi qaba inay dhac ugeestaan ciidanka.
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa shacabka Soomaaliyeed ugeesta dhibaatooyin kala duwan oo ay kamid yihiin dhac jirdl iyo sidoo kale kufsi xilli dhawaan Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu kasoo saaray waaamiir adag inaysan ciidanka dadka dhibaateen karin.